समुद्रको किनारमा अनौठो चीज भेटेपछि आमा छोरीले घरमा ल्याए, झण्डै गएन ज्या’न ! – Patrika Nepal
मंग्सिर १२, २०७८ आइतबार 75
काठमाडौं। बेलायतको केन्टमा बस्ने आमाछोरीले समुद्र किनार घुम्ने क्रममा अनौठो बस्तु भेटेपछि घरमा लिएर आए । उनीहरुले यस लाई भान्छामा राखेका थिए । भा’न्छामा त्यो वस्तु वि’ष्फोट भयो ।
आमाछोरी भने भाग्यले बचे । खासमा उनीहरुले त्याएको त्यो वस्तु दोस्रो वि’श्वयु’द्धमा प्रयोग गरिएको न’पड्किएको ग्रे’नेड थियो । ३८ वर्षकी जोडी क्रुज र उनकी छोरी ८ वर्षकी इसाबेलाले समुद्र किनारमा घुम्ने क्रममा यो वस्तु भेटेका थिए ।
तर, यसो गर्नासाथ त्यो वस्तु आगोको गोलामा परिणत भयो । उनले भनिन् ‘मेरी छोरी चिच्याउँदै भागिन् । मैले त्यसलाई समातेर दौडिँदै गएर किचनमा फ्याँकिदिएँ जहाँ त्यो विष्फोट भयो ।’
Prevकठै !घर जग्गा राखेर श्रीमान विदेश गए,अहिले उतै स्त्रीसंग मोज गर्दा घर नै बिर्सिए (भिडियो हेर्नुस्)
Nextमात्रै २ वटा ल्वाङले हटाउनेछ यतिधेरै स्वास्थ्य समस्या, यसरी गर्नुस् प्रयोग
२ जनालाई ओमिक्रोन फेला परेपछि लकडाउनको बारेमा आयो अत्यन्तै जरुरी सूचना !
आफ्नो बिहेमा ३ लाख रुपैयाँको माला लगाएर भाइरल भएका जोडी मिडियामा (भिडियो सहित)